ရွှေညဝါဆရာတော် တရားဟောခွင့် တနှစ်ထပ်မံအပိတ်ခံရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရွှေညဝါဆရာတော် တရားဟောခွင့် တနှစ်ထပ်မံအပိတ်ခံရ
ရွှေညဝါဆရာတော် တရားဟောခွင့် တနှစ်ထပ်မံအပိတ်ခံရ
Posted by ကိုပါကြီး on Feb 14, 2012 in Copy/Paste |6comments
နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယကမှ ဆရာတော် ဦးပညာသီဟ ကို တရားဟောခွင့် ပိတ်ပင်မှု တနှစ်ထပ်မံ တိုးမြှင့်လိုက်သည်။
ဤသို့ ပိတ်ပင်ခံရမှု ထပ်မံတိုးမြှင့်လိုက်ခြင်းကြောင့် ယခုလ ၁၁၊ ၁၂ ရက်နေ့များတွင် တာချီလိတ်နှင့် ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက်များအတွင်း ခင်ဦး မြို့များတွင် ဟောပြောရန် စီစဉ်ထားသည့် တရားပွဲများလည်း ပျက်ပြယ်သွားခဲ့ရသည်။
ဆရာတော်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသည့် ဝေါဟာရ၊ အသုံးအနှုန်းများကို တရားပွဲများအတွင် ထည့်သွင်းဟောကြားသည် ဟူသည့် စွပ်စွဲချက်များဖြင့် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့မှ ၂ဝ၁၂ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ဝ ရက်နေ့အထိ တနှစ်တာ တရားဟောခွင့် ပိတ်ပင်ခံရပြီးဖြစ်သည်။
ယခုကဲ့သို့ တနှစ်ထပ်မံတိုးမြှင့်လိုက်ခြင်းမှာ ‘ဆိုဆုံးမ၍ မရသူ’အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရခြင်းကြောင့်ဟုလည်း ရွှေညဝါ ဆရာတော်က မဇ္ဈိမကို ဆက်လက်မိန့်ကြားသည်။
ရွှေည၀ါဆရာတော်ကို “ဆိုဆုံးမ၍ မရသူ” အဖြစ် သတ်မှတ်မည်ဆိုလျှင်
သတ်မှတ်သူ မဟနဘုန်းကြီးများကို ” အာဏာရှင် ဘုန်းကြီးများ “ဟု သတ်မှတ်ရမလိုဖြစ်နေသည်။
ဒီမိုကရေစီသို့ ဦးတည်နေတဲ့ခေတ်မှာ အာဏာရှင်တွေဆိုတာ သမိုင်းမှာ ကျန်ခဲ့ပါပြီ။
ဒါပေမယ့် ဗမာပြည်မှာတော့ သမိုင်းလက်ကျန် ဘာသာရေးအာဏာရှင်တွေ ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ အာဏာရှင်စံနစ်ကို ရွံမုန်းတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ တာဝန်ပဲကျန်ပါတော့တယ်။
အာဏာရှင်တွေ ဆိတ်သုဉ်းမှ လောကငြိမ်းချမ်းမှာပါ။
ဆုံးမတာ မနာခံဘူးဆိုတော့ မဟနက ဆရာတော်များမှာ
Actually , Should ban forever.
At first , I also thinking that MAHANA is not fair. But, I became understand why after listening what this monk says to public. Actually , should ban forever.
Why why why why ???? Just showing comments what u need?
” ဆုံးမတာ မနာခံဘူးဆိုတော့ မဟန က ဆရာတော်များမှာ
ဆုံးမနိုင်လောက်တဲ့ သမာသမတ်မရှိတာကြောင့်ဖြစ်မယ် ”
နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယက မှ ဆရာတော် တွေကို
မကိုးကွယ် မဆည်းကပ်တော့ပါဘူး ။
တိုင်းပြည် နှင့် ပြည်သူကကျွေးတဲ့ ဆွမ်းတော့စားနေပြီး ။
တိုင်းပြည် နှင့် ပြည်သူ ကောင်းအောင်တော့ ကိုယ်တိုင်လည်း လုပ်မပေး ။
တိုင်းပြည် နှင့် ပြည်သူ ကောင်းအောင် လုပ်ပေးနေတဲ့
ဆရာတော်တွေကိုကျတော့ လိုက်နှောက်ယှက်နေတယ် ။
တော်တော် ကျေးဇူးကန်းတဲ့ မဟန တွေ ။
နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယက အဖွဲ့ကို ဖျက်သိမ်းသင့်နေပြီ ။